Abesifazane emhlabeni wonke uyazibuza onjani kwekhanda kungcono ukugqoka - noma ngaphandle esiphongweni sakhe? Kwesinye isikhathi lokhu kubonakala isici elincane zezinwele kungaba Chic futhi uphelelise le ukusikisela yokuqala, futhi ngezinye izikhathi bangase nje konakalisa umqondo jikelele yesithombe. Bobabili ongakhetha - kokubili zezinwele nge esiphongweni kanye ngaphandle kwalo - kunezimo yabo, futhi kufanele zikhethwa siqu ukunambitheka kanye ebusweni shape yabo.
Okulingene obuphelele kwekhanda ngaphandle esiphongweni ezifaneleke abanikazi okusaqanda kanye idayimane ezimise ubuso. Uma nezinwele abangalawuleki, kanzima noma kakhulu curled, akukuhle ukuba ulinge, futhi, wokuba ame ngesikhathi kwekhanda elula.
Ugunda ngaphandle esiphongweni ku izinwele ezinde mkhulu cishe noma yimuphi owesifazane. Buhle le kwekhanda Kuyaphawuleka ukuthi kuba lula ukwenza isitayela nsuku zonke futhi udale izithombe ezintsha.
Abesifazane abaningi ukugqoka esiphongweni, ikakhulukazi njengoba cishe ongacimekiyo fashion. kukhethwe kahle, lesi sici zezinwele agcizelele ubuhle amehlo izogxila emandla ufihle amaphutha amancane. Umumo esiphongweni Kufanele kukhethwe ngokuvumelana ebusweni shape. Haircut nge bang ngo-2013 - okuningi ongakhetha ukukhetha kwekhanda cishe yimuphi umbala izinwele.
Ubuso uhlobo bonke abantu abafani, futhi abesifazane abaningi ngokuvamile enganelisekile ngendlela ebukeka ngayo: abanye abantu bacabange ukuthi bakhululekile kwesilevu kakhulu, futhi ongamthandi yakhe cheekbones okusezingeni eliphezulu. Kodwa izinkinga ezinjalo kulula ngempela ukuxazulula ngosizo ngamunye akhethiwe kwekhanda kucocekile. Perfect le kwekhanda nge esiphongweni etshekile, okungaba noma eside noma esifushane. Labo abafisa ukufihla angularity ebusweni, esiphongweni efanelekayo i lwaleli lapho izinwele ezinhlangothini isikhathi eside kunaleso maphakathi. Lokhu imodeli kwekhanda efanelekayo izinwele ebuhleni nasebubini.
Abanikazi ezisontekile futhi nxazonke ebusweni shape isudi esiphongweni azinze ngakolunye uhlangothi. Kodwa musa ukwenza iphutha ezivamile futhi ungazami ukuqondisa izinwele. Kuyoba kuphela nokungezwani esithombeni bese wenze kube iwubuphukuphuku. Uma wenza kanjalo esiphongweni sifushane kakhulu, kuyoba njalo ukuba kwaleso esibekiwe, esinguJesu zingavumi njalo. Njengoba kahle kulesi simo uyobheka kwekhanda ngaphandle esiphongweni.
Asymmetry e kwekhanda umphelelisi futhi ukunikeza ukubukeka stylish kunoma yimuphi owesifazane. Ngezinye umnikazi we ubuso kobujamo obusaqanda sizobukeka sisihle okuthiwa "Ragged" ukugunda izinwele. Ziyakwazi kulula ukugxila zonke izici best Ingaphandle. Ukushintsha izinwele isitayela usebenzisa umphetho Ragged, uzophawula ukuthi ukubukeka isibe ekhululekile futhi kuzenze zibathinte nakakhulu. Okunjalo zezinwele - lo mkhuba isizini namuhla.
Ephambi kwezinduna ephezulu brow kangcono hairdo ukugunda izinwele kuba umphetho eside futhi obukhulu. Haircut esiphongweni nesithombe, ngaphezu lesi sihloko, ubona umagazini imfashini, noma iyiphi salon ubuhle, kwenza umuntu ongaphansi kweminyaka engu-ongaboni njalo. Futhi, le kwekhanda uphelele abameleli esiyindilinga ubuso.
Labo babe izinwele iqonde futhi curvy, nge air igalelo-iphele kufanele iqondiswe ezansi, bese ubeke umucu. Ukuze anikeze umthamo ezengeziwe kumele kusetshenziswe Foam noma mousse. Ugunda ngaphandle esiphongweni ku ezisontekile ukufanele engcono ngokusebenzisa ekulungiseni indlela. Ukuze sibhekane ngokuphumelelayo sivala abangalawuleki, sebenzisa ikamu round ukuma. Kuyasiza ukudonsa kalula futhi bayiphica izinwele.
Estel umugqa - tint balms
Uzungu sebhali ngesinye iso
Pecheniz'ke Reservoir: umlando, izici zemvelo, iholide
Inkukhu umucu in Batter ne ushizi: zokupheka
Sekunqunyiwe kakade ukuthi kuzoba khona ama-Olympic 2020